Pirojeektii Zero Balance
Pirojeektii Zero Balance Dakota, Hennepin, Ramsey, Minneapolis, fi St Paul
Iyyata [Afaan Oromootif] [Oromo] kan jedhu marsaaritii iyyatichaa irraa filadhaa.
[Afaan Oromootin] iyyachuuf, iyyata waraqaa asii buufadhaa.
Kaawuntiiwwan Daakotaa, Hennepin fi Raamsey, akkasumas magaalonni Minneapolis fi Seeyint Paawul karaa sagantaa The Zero Balance Project jedhamu deeggarsa kiraa yeroo hatattamaa kennaa jiru.
Piroojektii Herreega Zeeroo (Zero Balance Project) keessatti, kireessitoonni iyyaticha bakka kireeffattoota isaanii jalqabuun duursu.
Yeroo ammaa deeggarsa kiraa yeroo hatattamaa lamatu MN keessa jiru: RentHelpMN fi The Zero Balance Project dha.
Iyyata galfachuu keessaniin dura kan armaan gadii dubbisaa:
Kireeffattoonni kiyya RentHelpMN dhaf iyyatanii turan. Karaa The Zero Balance Project deeggarsaaf iyyachuu ni dandeenyaa?
Abbootin/hooggantoonni qabeenyaa fi kireeffattoonni ji'oota walfakkaataa keessatti sagantaa tokko qofa irraa deeggarsa argachuu danda'u.
Yoo kireeffataan iyyata RentHelpMN dhaf galfate, maaloo sagantaa sana waliin hojjechuu itti fufaa.
Ani hoogganaa/abbaa qabeenyaa durumaan qabeenyota kiyya RentHelpMN biratti galmeessiseedha. The Zero Balance Project birattis galmeessisuu fi odeeffannoo kennuufin qabaa?
Yoo kireeffataan keessan iyyata RentHelpMN'dhaf galfate, maaloo sagantaa sana waliin hojjeechuu itti fufaa.
Yoo kireeffataan keessan iyyata RentHelpMN'dhaf galfatee isin ammoo iyyata The Zero Balance Project biratti jalqabuu barbaaddan, The Zero Balance Project biratti galmaa'uu fi sanadoota barbaachisan achitti ol fe'uu isin barbaachisa.
Sanadoonni fi odeeffannoon sagantaalee gidduu hin dabarfaman. Abbootin/hooggantoonni qabeenyaa fi kireeffattoonni ji'oota deeggarsaa walfakkaatoo keessatti deeggarsa sagantaa tokko qofa irraa akka fudhachuu danda'an yaadadhaa.
Garaagarummaan RentHelpMN fi The Zero Balance Project gidduu jiru maali?
RentHelpMN fi The Zero Balance Project'n, lachuu isaanii sagantaa deeggarsa kiraa yeroo hatattamaa karaa sagantaa deeggarsa maallaqaa federaalaa tokkoon deeggaramaniidha.
RentHelpMN'n sagantaa isteetii guutuu yommuu ta'u kireeffataatu adeemsa iyyataa duursa.
The Zero Balance Project'n kaawuntiiwwan Daakotaa, Hennepin fi Raamsey kan tajaajilu yommuu ta'u, abbootii fi hooggantoota qabeenyatu adeemsa iyyataa duursa. Qabxiiwwan xiyyeeffannoo tokkoon tokkoon sagantaa kunooti.
Kireeffattoonni fi abbootin/hooggantoonni qabeenyaa lachuu iyyannoowwan jalqabuu ni danda'u.
Kireeffattoonni odeeffannoo galii fi dimogiraafii, kiraa yeroon irra darbee fi/yookan kaffaltiiwwan faayidaalee bu'uuraa fi waliigaltee liizii dhiheessu akkasumas dhiibbaa COVID mirkaneessu.
Abbootin/hooggantoonni qabeenyaa odeeffannoo qabeenyaa fi kaffaltii dhiheessun hamma kaffaltii irraa qaban mirkaneessu.
Daangaawwan galii: 80% AMI
Deeggarsa olaanaa: hanga ji'oota 15
Baasiwwan fudhatama qaban kiraa, kaffaltiiwwan kiraa, tajaajiloota bu'uuraa (utilities) fi tajaajiloota bu'uuraa kireeffataadhan kaffalaman hammata
Iyyannoowwan bu'uura banaa ta'een hanga Muddee 2021 fudhatamu
Maallaqni dimshaashni miliyoona $518
Odeeffannoo dabalataatif 211 irratti bilbilaa
Piroojektii Herreega Zeeroo (The Zero Balance Project)
Kaawuntiiwwan Daakotaa, Hennepin fi Raamsey, Minneapolis fi Seeyint Paawul dabalatee
Iyyannoowwan kan jalqaban abbootii/hooggantoota qabeenyati.
Abbootin/hooggantoonni qabeenyaa odeeffannoo liizii, hamma kiraa irraa qaban fi odeeffannoo kaffaltii dhiheessu.
Kireeffattoonni odeeffannoo galii fi dimogiraafii kennu akkasumas dhiibbaa COVID mirkaneessu.
Baasiwwan fudhatama qaban kiraa, kaffaltiiwwan kiraa akkasumas tajaajiloota bu'uuraa (utilities) liizii keessatti dabalaman hammata. Tajaajiloonni bu'uuraa (utilities) maqaa kireeffataatin jiran sagantaa kana keessatti fudhatama hin qaban.
Iyyannoowwan Waxabajjii 7 hanga Waxabajjii 20, 2021 yookan hanga maallaqni dhumutti fudhatamu
Maallaqni dimshaashaa miliyoona $34, carraa maallaqa akka barbaachisaa ta'etti dabaluu waliin
Odeeffannoo dabalataatif, iimeelii ergaa zerobalanceproject@housinglink.org
Baasiwwan akkamiitu The Zero Balance Project keessatti fudhatama qabu?
Kiraa hin kaffalamne
Bitootessa 13, 2020 irraa jalqaba.
Tajaajiloota bu'uuraa fi kaffaltiiwwan hin kaffalamne liizicha keessatti dabalaman
Xuraawaa/Xuraawaa Jajjaboo/Funaansa Irra deebi'anii Fayyadamuu
Boba'aa hamma guddaa (Muka qoraanii, Caccabaawwan mukaa, piroopeenii)
Kaffaltiiwwan osoo hin kaffalamin turan
Hanga 8% kiraa waliigalaa, akka seera MN dhan eeyyamamutti, Bitootessa 13, 2020 irraa eegala.
Ji'oota 3 Kiraa Gara Fuulduraa (kiraa karoorfame)
Kaffaltiiwwan gara fuulduraa mirkanaa'un dura, kiraan hin kaffalamne kaffalamuu qaba.
Tajaajiloonni bu'uuraa akka qaama kaffaltii kiraatti kireessadhaan uwwifaman akka kiraatti fudhatamu.
Maatiwwan Kireeffataa Kamtu The Zero Balance Project'dhaf fudhatama qabu?
Kireeffataan rakkoo mana dhabeessummaa yookan mana dhaabbataa hin taaneef saaxilamaadha.
Qabeenyichi naannowwan kanneen keessa tokko keessatti argama:
Kaawuntii Hennepin, Minneapolis dabalatee
Kaawuntii Ramsey, Seeyint Paawul
Galiin maatii kireeffataa 80% Galii Giddugaleessa Naannooti yookan isaa gadi:
Maatii nama 1 - $55,950
Maatii namoota 2 - $63,950
Maatii namoota 3 - $71,950
Maatii namoota 4 - $79,900
Maatii namoota 5 - $86,300
Maatii namoota 6- $92,700
Maatii namoota 7 - $99,100
Maatii namoota 8 - $105,500
Yoo xiqqaate maatii kireeffataa keessan namni tokko faayidaalee hojii-dhabdummaatif ulaagaa guutee jira YOOKAN sababa weerara vaayirasii koronaatin hir'inni galii maatii mudatee, baasiwwan guddaa baasee, yookan rakkinoota maallaqaa biroo mudatee jira, isaanis kan akka:
Sa'aatiwwan yookan galii hir'atan
Sababa iddoo nagaa hin taanen hojii gadi dhiise.
Maatii kunuunsuf hojii gadi dhiise.
Sababa manni barumsaa cufameef yookan jijjiirramoota kunuunsa ijoollee hojii gadi dhiisuf dirqame
Baasiwwan kunuunsa daa'imaa dabalan.
Sababa manni barumsaa cufameef daa'imni mana jira.
Fageenya irraa hojjechuuf yookan barumsa hordofuuf baasin interneetii argachuu fi kompuuteraa barbaachisaadha.
Baasiwwan yaala fayyaa yookan awwaalchaa sababa COVID-19.
Bittaa meeshaalee eegumsa dhuunfaa.
Baasiwwan geejjibaa filannoo.
COVID-19 dhan qabame.
Sababa COVID-19 saaxilamameef adda-baafame.
Namoota biroo COVID-19 qaban kunuunse.
Waan Kireessitoonni Iyyata The Zero Balance Project dhaf Qopheessuu qaban
Garagalcha liizii guutuu.
Ibsa gibira qabeenyaa kan iddoon qabeenyichi itti argamu agarsiisu. (Kaawuntii Daakotaa, Kaawuntii Hennepin, Kaawuntii Raamsey)
Galmeen herreega kiraa kiraa, kaffaltiiwwanii fi tajaajiloota bu'uuraa hin kaffalamin agarsiisa (tajaajiloota bu'uuraa liizicha keessatti dabalaman qofatu kaffalamu)
Yoo kireeffataan kiraa deeggarsa galii irratti hundaa'etiin kaffale (fkf. Voocharii Filannoo Manaa/Housing Choice Voucher) - Hubachiisni abbaa taayitaa manneenii irraa kan akkamitti akka qoodni kiraa kireeffataa sababa galii dhabuutin akka sirreeffame agarsiisu.
Teessoo iimeelii kireeffataa. Kuni karaa isaan qooda isaanii akka guutan itti affeerramaniidha.
Waan Kireeffattoonni Iyyata The Zero Balance Project dhaf Qopheessuu qaban
Iyyata kana keessatti, kireeffattoonni galiin isaanii ulaagaa kan guutu ta'uu mirkaneessuu qabu(Galiiwwan fudhatama qaban ilaalaa).
Filannoowwan 3 qabu:
Filannoo 1 - Garagalcha fuula duraanii 2 gabaasa gibira galii 2020 olfe'uu.
Filannoo 2 - Sanada sagantaalee namoota galiiwwan gadi aanaa qaban tajaajilaniif fudhatama qabaachuu isaanii mirkaneessu olfe'uu. Fakkeenyaf: SNAP, WIC, Kutaa 8, TANF, FDPIR, SNP).
Sanadoonnis maqaa fi teessoo kireeffataa agarsiisuu qabu.
Sanadoonnis kan 1/1/2020 booda kireeffataadhaf kennaman ta'uu qabu.
Filannoo 3 (Filannoowwan lamatu as jira)
1. Unkaa Waraqaa Ragaa Galii Zeeroo Fe'aa. Garagalchi kuni buusudhaaf iyyaticha keessatti ni argama.
2. Madda galii isaanii fi hamma isaa kallattiidhan iyyaticha keessatti galchu.
Kireeffataan sanadoota galii isaanii olfe'uutu irraa eegama (Fakkeenyaf: Nagahee kaffaltii agarsiisu). Iyyaticha keessatti, kireeffattoonni kan armaan gadii akka godhanis ni gaafatamu:
Hammi kiraa, kaffaltiiwwan, fi tajaajiloota bu'uura hin kaffalamne kireessan gaafataa jiru sirrii ta'uu isaa mirkaneessuu.
Rakkinoota COVID-19 yookan faayinaansii isaanii ibsaa (Rakkinoota fudhatama qaban ilaalaa).
Deeggarsa kiraa yeroo hatattamaa COVID-19 isaan duraan fudhatan (yookan isa kireessitoonni bakka isaanii fudhatan) kamiyyuu tarreessuu. Iyyaticha keessatti hamma akka galchan gaafatamu.
Gaaffilee Baratamoo Waa'ee The Zero Balance Project
Ani duraan RentHelpMN yookan iyyata Kaawuntii Hennepin Bitootessa 2021 irraa deeggarsa fudhadheen ture. Yoo ammallee gargaarsi na barbaachise, deeggarsa The Zero Balance Project irraa gaafachuu nan danda'aa?
Haalota kam keessattuu, kan sagantaalee hundaa walitti ida'amee, waliigala deeggarsa kiraa ji'oota 15 qofa argachuu dandeessu, kunis yeroo dhihoo waliigalatti gara ji'oota 18 ol kan guddatu ta'a.
Yoo RentHelpMN yookan Kaawuntii Hennepin irraa ji'oota 15 yookan isaa gadiitif deeggarsa fudhattan, gargaarsa dabalataa isin barbaaddaniif Zero Balance Project'dhaf iyyata galchuu jalqabuu maltu. Iyyanni keessan sagantaa tokko irraa gara kan biraatti darbuu waan hin dandeenyef, iyyata haaraa jalqabuu isin barbaachisa.
Hanga ammaatti iyyata hin jalqabne. Sagantaa kamtu anaaf hundarra gaaridha, RentHelpMN yookan The Zero Balance Project?
Isaan deeggarsa Kaawuntiiwwan Daakotaa, Hennepin fi Raamsey keessatti barbaadanii fi kan deeggarsa kiraa RentHelpMN dhaf hin iyyanneef , sagantaalen lachuu isiniif hin jiru.
Abbootii/hooggantoota qabeenyaa kireeffataan akka adeemsa iyyatichaa duursu filataniif, RentHelpMN'n filannoo gaarii ta'uu mala.
Kireeffattootaa fi abbootii/hooggantoota qabeenyaa abbootin/hooggantoonni qabeenyaa akka adeemsa iyyatichaa duursan filataniif, The Zero Balance Project'n filannoo baay'ee gaarii ta'uu mala.
Tokkoon tokkoon kutaa keessatti hammi guddaan ani iyyachuu danda'u meeqa?
Hammi olaanan kaa'ame hin jiru.
Akkamittan ji'oota 3 kiraa karoorfame (gara fuulduraatif) iyyadha?
Kireeffattoonni kana godhu. Kutaa iyyatichaa kireessaa keessatti, saanduqni mallattoon irra kaa'amu jira, kunis yoo ji'oota gara fuulduraa kanneenif kiraa kaffaluu akka hin dandeenye kan beekan ta'e, iddoo kiraa karoorfame (gara fuulduraatif) itti iyyachuu danda'aniidha.
Kireeffattoonni kiyya kuni deeggarsa/faayidaalee biroo isaan argatan ni miidha jedhanii yaadda'u. Ni miidhaa?
Lakkii. Kuni akka galiitti hin lakkaa'amu. Kaffaltichi kallattiidhan kireessadhaaf gala.
Kireeffattoonni kiyya kan hin galmoofne waan ta'aniif odeeffannoo isaanii kennuudhaf ni sodaatu. Maalan isaanitti himuu qaba?
Maqaawwan maatii ICE dhaf HIN gabaasaman. Kaawuntiiwwan Daakotaa, Hennepin, fi Raamsey akkasumas magaalonni Minneapolis fi Seeyint Paawul daaticha ni argatu.
Kireeffattoonni kiyya kutaa iyyatichaa isaan ilaallatu hin guutan. Ammallee iyyachuu nan danda'aa?
Lakkii. Kireeffattoonnis kutaa iyyatichaa isaan ilaallatu guutuu qabu.
Yoo iyyanni kiyya mirkanaa'e, kaffaltii yooman argadha?
Gaafa mirkanaa'e irraa kaasee guyyoota 14 keessatti cheekin teessoo kireessan kennetti poostadhaan ni ergama.
Iyyannoowwan akkamitti dursa argatu?
Iyyannoowwan bu'uura kan dura dhufe dura keessummeessama jedhu irratti hundaa'un hanaga Waxabajjii 20'tti, haalota addaa armaan gadii kanneen waliin qoratamanii kaffalamu:
Iyyannoowwan kiraa hin kaffalamin kuusamanii iyyannoowwan kiraawwan gara fuulduraatif iyyataman kamiyyuu dura adeemsifamu, akkasumas
Iyyannoowwan galiin maatii kireeffataa 50% galii giddugaleessaa naannotiin wal qixa yookan isaa gadii itti ta'u yookan miseensi maatii tokko yookan isaa ol guyyoota 90'f hojii kan hin qabne itti ta'an, iyyannoowwan biroo dura adeemsifamu.
Iyyata kiyya durumaanuu galfadheen jira, amma garuu waa'ee isaa nama tokko haasofsun barbaada. Eenyun dubbisuu qaba?
Iimeelii ergaaZeroBalanceProject@FHFund.org yookan 612-895-7880 irratti isaanif bilbilaa.
Kireeffattoonni kiyya kutaa iyyataa isaan ilaallatu guutuf gargaarsa barbaadu. Eenyu dubbisuu qabu?
Iimeelii ZeroBalanceProject@FHFund.org yookan 612-895-7880 irratti isaanif bilbilaa.
Haala iyyanni kiyya irra jiru baruuf eessattin ilaaluu danda'a? Yommuu iyyatichi mirkanaa'u akkamitti na beeksisu?
Haala iyyanni keessan irra jiru baruuf, akkaawuntii Neighborly keessanitti seenaa. Yoo gaaffii qabaattan, iimeelii lakkoofsa iyyata keessanii fi gaaffii keessan qabu ergaa ZeroBalanceProject@FHFund.org Yeroo iyyanni keessan qoratame iimeelin isiniif ergama.
Iyyata kufe akkamittan oliyyadha?
Erga iimeelin didamuu isaa ibsu isiniif ergamee booda guyyoota 10 qabdu. Iimeelii odeeffannoo tooftaa qunnamtii fi lakkoofsa iyyata keessanii, sababa(oota) iyyanni keessan itti didame, akkasumas maalif diddaan dogongoraan akka godhame jettanii akka amantan qabu ergaa. Appeals@FHFund.org
Iyyata Asitti Galchaa